xidhmo dr.fone Support Center
Waxba ma ahan wixii dhibaato ah aad la kulanto marka la isticmaalayo xidhmo dr.fone, waxaan had iyo jeer halkan si lagaaga caawiyo in aad iyaga ka shaqeeyaan.
Ceshano Code Diiwaangelinta
Si aad nooga caawiso aan kuu caawino sida ugu dhaqsiyaha badan, fadlan ka jawaab su'aalaha soo socda 2-3, oo waxaan idinku hanuunin kooxda xaq u adeega. (Support Technical, Taageerada Macaamiisha ama Sales)
Sideen annagu kuu caawin karaa?
Waxaan leeyahay qaar ka mid ah su'aalaha farsamo oo ku saabsan alaabta aan ku iibsaday.
Waxaan qabto su'aal ku saabsan xeerka diiwaangelinta, duuban, rakibidda ama kaakicin aan wax soo saarka.
Waxaan doonayaa in aan ogaado oo ku saabsan siyaasadaha liisanka, hagaajinta iyo soo celiyo.
Waxaan kaliya is bilaabay oo aan su'aalo qaar ka mid ah.
Waxaan leeyahay qaar ka mid ah su'aalo ku saabsan wax soo saarka hawlaha iyo xadka ka hor inta aan lagu iibsado.
Waxaan hore u sameeyey iibsashada ah , laakiin waxaan qabaa su'aalo ku saabsan Amarkeygii .
Waxaan leeyahay talooyin Tababaraha sheyga.
Waxaan doonayaa in aan dib u eegista aan wadaagno macaamiisha kale.
Fadlan dooro baahidaada gaarka ah ka hoos.
Su'aashaydu waxay ku saabsan tahay soo kabsaday files ka iPhone, iPad iyo iPod taabashada.
xidhmo dr.fone macruufka
xidhmo dr.fone for Android
Waxaan leeyahay qaar ka mid ah su'aalo ku saabsan hawlaha iyo xadka alaabta ka hor inta aan lagu iibsado.
Wondershare Dr, Fone macruufka
Su'aashaydu waxay ku saabsan tahay recoverying files ka Android casriga (Samsung, iwm.)
None ee kor ku xusan, fadlan dooro barnaamijka aad xiisaynayso
Fadlan boostada su'aalaha iyo jawaabaha ka khubarada ee PDFelement Community.
Fadlan dooro category ka mid ah sida ugu fiican u tilmaamaya arrinta.
Waxaan doonayaa in aan ogaado sida barnaamijku u shaqeeynayo inuu ka soo kabsado xogta aan ka hor inta aan u iibsato.
Our software awood u qamaar errros macruufka ah sida kuwa ku qoran. Taas macnaheedu waa in nidaamka qalliinka waxaa cusboonaysiiyey (tusaale xayiran in hab-kabashada, ama Apple logo loop) iyo soo celiyo qalabka si xaalada hawlgalka caadiga ah. Taas waxaa la samayn karaa iyada oo aan saamayn ku xogtaada. Tani waa muujinta ah in shaqeyn doonaan oo kaliya in version bixisay of our software, iyo ma jiraan wax damaanad ah in ay ushaqayn doonto.
Awesome, dhibaato xalin! Waxaan u baahanahay gargaar si toos ah. Bilow ka badan
Waxaanu qiimaynaa ra'yiga macaamiisheena, iyo soo dhawaynaynaa inaad noo sheegto waayo aragnimadaada aad Product Wondershare. Noo soo dir si aad fikrado, codsiyada, ama xataa comments. Inkasta oo aan si toos ah aan ka jawaabi kartaa warcelin, waxaan u isticmaali doonaa si loo hagaajiyo alaabta iyo adeegyadayada. Haddii aad leedahay xaalad farsamo ama taageero, markaa si raxmad leh nala soo xiriir adiga oo isticmaalaya Xarunta Taageerada our, sida aan awoodin in ay bixiyaan gargaar noqon doonaa
Fikrado soo jeedina ama shuruudaha sifooyinka barnaamijka
ammaan A ah oo ku saabsan alaabta
Waxaan run ahaantii mahad comments aad iyo talooyin waxyaabaha our. Your-celin loo gudbin doonaa kooxda horumarinta dib u eegista iyo si ay u arkaan haddii ay lagu dari karaa si daayo mustaqbalka. Inkasta oo aan awoodin in ay dib ugu soo jawaabin, garanaynaa inaynu samayn doono oo dhan oo aan awoodno si ay u sameeyaan wax soo saarka ugu wanaagsan in aan awoodno, iyo warcelin naga caawin doonaa heshiis weyn.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad la mid ka mid ah waxyaabaha our, la xiriir kooxda taageerada noo on Xarunta Taageerada our.
Waad ku mahadsan tahay waqtiga aad, iyo taageero!
(Size file Upload ugu badan: 60 MB)
Pay Habka Paypal Card credit
Operation System Windows 10 (32bit) Windows 10 (64bit) Windows 8 (32bit) Windows 8 (64bit) Windows 7 (32bit) Windows 7 (64bit) Windows Vista (32bit) Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Mountain Libaaxa) 10.7 (Libaaxa) 10.6 (Snow Leopard) 10.5 (Leopard) 10.4 (Tiger) 10.11 (Captain) 10.12 (Sierra) kale
Product Version Windows (7.0.2) Windows (7.1.0) Windows (7.2.0) Windows (7.3.0) Mac (6.1.0) Mac (6.9.0) Mac (7.0.0) kale
Operation System Windows 10 (32bit) Windows 10 (64bit) Windows 8 (32bit) Windows 8 (64bit) Windows 7 (32bit) Windows 7 (64bit) Windows Vista (32bit) Windows Vista (64bit) Windows XP (32bit) 10.10 (Yosemite) 10.11 (Yosemite) 10.9 (Mavericks) 10.8 (Mountain Libaaxa) 10.7 (Libaaxa) 10.6 (Snow Leopard) 10.5 (Leopard) 10.4 (Tiger) 10.11 (Captain) 10.12 (Sierra) kale
Android Data Recovery Card SD Android Data Recovery Android fashilmay screen Recovery Data Android Lock Screen raritaanka
Emayl ii soo dir xal this
Weli u baahan gargaar?
Bixinta macluumaadka la codsaday oo waxaan kuu xidhi doona mid ka mid ah wakiilada taageero our.